आमालाई चिठी :: सुकृति सारा शर्मा :: Setopati
सुकृति सारा शर्मा
यहाँ हामी सबैलाइ सञ्चै छ। त्यहाँ हजुरलाई पनि सञ्चै छ होला। यता काठमाडौँमा दिनहुँ पानी परिरहेको छ। त्यता पनि पानी परेको छ कि छैन? आज मैले हजुरलाई धेरै सम्झिरहेकी छु। त्यही भएर म हजुरलाई चिठी लेखिरहेकी छु।
त्यहाँ बुबा पनि सञ्चै हुनुहुन्छ होला। मेरो पढाइ राम्रोसँग चलिरहेको छ र अब अर्को पनि कविता लेख्ने विचारमा छु। ममीले त्यसलाई पोखराको कविता प्रतियोगितामा पठाइदिने भन्नुभएको छ। हेरौँ के हुन्छ। कोरोना महामारीले गर्दा घर आउन सकिएन। जहाँ छौ त्यही सुरक्षित बसौँ।
लकडाउन खुलेपछि त्यहाँ आउने नै छौँ। नआत्तिकन बस्नुहोला है आमा! अनि म चार कक्षामा पुगे नि। हाल मेरो स्कुलमा पढाइ भएको छैन। मेरो अनलाइन कक्षा यही असार ६ गतेदेखि हुँदैछ। चार कक्षाका किताब र कपि अझसम्म किनेको छैन। अब कसरी किन्ने हो त्यो पनि थाहा छैन किनकी सबै पुस्तक पसलहरू हाल बन्द रहेका छन्। पुस्तक पसलहरु खुलेपनि जान डर छ। त्यही भएर चिन्तामा छु।
गर्नुपर्ने कुरा त कति छन् कति। बाँकी कुरा सबै सविस्तार भेटमा गरौँला। हवस् त आजलाई बिदा।
हजुरकी प्यारी नातिनी
(सुकृति सारा विनायक शान्ति निकेतन मा.वि. थापाथली, काठमाडौँमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत छिन्।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३, २०७८, ०२:४४:००